ထူးထူးခြားခြား Archives - Page2of3- CeleHits
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီကနေ့ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ $ 48000 ထိတန်ကြေးရှိတဲ့ဒူးရင်းသီးအကြောင်းပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိလေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒူရင်းသီးတစ်တစ်လုံးဟာ ဘတ် ၁.၅သန်း (ဒေါ်လာ ၄၈,၀၀၀)အထိ လေလံအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Nonthaburiမြို့ ရှိ ဒူရင်းပွဲတော်မှာ အဆိုပါဒူရင်းသီးဟာ ချမ်းသာတဲ့လေလံဆွဲသူတွေကို ဆွဲဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒူရင်းသီးနဲ့အတူ အခြားဒူရင်းသီး ၈လုံးကို မော်ဒယ်မတွေက ကတ္တီပါခေါင်းအုံးပေါ်တင်ပြီး ဖျော်ဖြေပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲရဲ့ ဈေးအနည်းဆုံးဘတ် ၂၀,၀၀၀(ဒေါ်လာ ၆၄၀) ဒူရင်းသီးကို လေလံပွဲမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုမှာ Pa Toi Lung Muဒူရင်းခြံမှာ ခူးယူထားတာပါ။လေလံပွဲမှာ ဘတ် ၃၀၀,၀၀၀(ဒေါ်လာ ၉,၅၈၅)ကျော်ရောင်းချတဲ့ Monthong နဲ့ Kop Med Taoစတဲ့ဒူရင်းမျိုးစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ Nonthaburiမြို့ထွက်မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ Kanyaoဒူရင်းဟာ ချိုစိမ့်တဲ့အရသာကြောင့် လူသိများ၊ကြိုက်များပါတယ်။၂၀၁၁ခုနှစ်တုန်းက မြို့ထဲရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဒူရင်းပင်အားလုံးနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမဲ့ ကျန်ရှားပါးမျိုးစိတ်ပင်တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံက သိတဲ့အတိုင်း ဒူရင်း crazyဖြစ်ကြတာကို … Read more
ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကတော့ အွန်လိုင်းမှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အဆိုတော် ရော့ကာကြီး ကိုမျိုးကြီးရဲ့ ညီလေးရေ သီချင်းကို ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါနဲ့ ဆိုပြတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗွီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိတဲ့ဂစ်တာလေးနဲ့ ကလေးနဲ့အတူ မျိုးကြီးရဲ့ ညီလေးရေ သီချင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ သီဆိုနေတဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း လူတိုင်းသဘောကျနေပါတယ်။ အဆိုတော်မျိုးကြီးရဲ့ ညီလေးသီချင်းဟာလည်း လူငယ်တွေအတွက် လမ်းမှားမရောက်အောင် လမ်းပြပေးတဲ့သီချင်းဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေက အလွန်ပင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူ့ဘဝမှာ လက်ရှိဘဝကို လက်ခံပီး ပျော်အောင်နေတတ်ခြင်းဟာလည်း ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆောင်အယောင် ဂုဏ်ပကာသနတွေကိုဘေးချိတ်လို့ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ဘဝမှာ ရှိတဲ့ဟာနဲ့ ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ လူကြီးဖြစ်သူက ဂစ်တာလေးတီးပီး ကလေးဖြစ်သူက ရောကာမုသွင်းကာ အားရပါးရစီးမျောသီဆိုနေတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ဘဝလေးတွေရဲ့ ရိုးရှင်းမှုနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရော့ကာဆန်ဆန် သီဆိုပုံကို ပရိတ်သတ်ကြီး … Read more
မတ်စောက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုကို တက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ဒီအတိုင်း ခြေကျင်တက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ တေက်တက်ဖို့ တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်ထိပ်ပေါ်က ရှိတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ် အဲဒါတွေပါမှ မတ်စောက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူ တက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်တက်ဖိနပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ခြေလှမ်းတစ်ချက်မှားတာနဲ့ တောင်ပေါ်ကနေ လိမ့်ကျပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်း ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးဟာ မတ်စောက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ကို ဘာကိရိယာပစ္စည်းမှ မပါတဲ့အပြင် ဘာဖိနပ်မှမစီးထားပဲ ဒီအတိုင်းလေးတက်သွားတာကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ နာမည်ကြီးနေကြောင်း Timesnonews သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကတော့ Ya Motha လို့ အမည်ရတဲ့ Twitter အကောင့်ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ အဆိုပါအမျိုးသားဟာ သူ့ဟာသူမတ်စောက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုအပေါ် တက်တဲ့ပုံကို … Read more
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်အတွက်ရိက္ခာတွေ တောင်ပေါ်ကနေ ဆင်းယူပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုး ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်အတွက်ရိက္ခာတွေကျနော်တောင်ခြေကိုပို့တိုင်းတောင်ပေါ်ကနေလာဆင်းယူပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားရဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရသံဝေဂပါ တောင်အောက်ကသူကတောင်ပေါ်မှာဘဝနိဂုံးချုပ် တောင်ပေါ်ကသူကတောင်အောက်မှာဘဝနိဂုံးချုပ် ကိုယ်လိုသလိုလုပ်ယူမရတဲ့လောကကြီးမှာသေချာတာကဘယ်အရွယ်ဘယ်အချိန်ဘာအဖြစ်နဲ့သေမယ်ဆိုတာကတော့သေခြင်းတရားကအသေချာ တောင်အောက်ကသူကတောင်ပေါ်မှာဘဝနိဂုံးချုပ် တောင်ပေါ်ကသူကတောင်အောက်မှာဘဝနိဂုံးချုပ် ကိုယ်လိုသလိုလုပ်ယူမရတဲ့လောကကြီးမှာသေချာတာကဘယ်အရွယ်ဘယ်အချိန်ဘာအဖြစ်နဲ့သေမယ်ဆိုတာကတော့သေခြင်းတရားကအသေခ်ာ ခဏတာနေရတဲ့ဘဝလေးမှာလောကကြီးကိုသာယာလှပစေဖို့လူတိုင်းကိုယ်စီမှာရှိနေတတ်တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေအတတ်နိုင်ဆုံးချိုးနှိမ်ပပျောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြဖို့လိုသလို မိမိကိုယ်တိုင်သည်လည်း- – -? Source : Saw Kyi Win
နှစ်(၆,၀၀၀)ကျော်ကြာမှ တစ်ခါကြွေတဲ့ ကြယ်အောက်မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
July 25, 2020 by CeleHits
ကြယ်တွေကြွေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလိုကြယ်ကြွေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အတူတူထိုင်ပြီး ကြည့်ရတဲ့ ခံစားချက်ဟာ ဘာခံစားချက်နဲ့မှ လဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုထိုင်ကြည့်တာ အားမရတလို့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဘဝမှာ တောက်လျှောက် မမေ့နိုင်တဲ့ ညတစ်ညဖြစ်မှာ အကျိန်းအသေပါပဲ။ အခုလည်း အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကောင်မလေးကို နှစ်ပေါင်း (၆,၀၀၀) ကျော်မှ တစ်ခါကြွေတဲ့ ကြယ်အောက်မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ကြောင်း Storypick သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ Instagram-@ tleach18 အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Oregon ပြည်နယ်ရှိ John Nicotera လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားဟာ သူ့ချစ်သူ Erica ကို နှစ်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်မှ တစ်ခါကြွေတဲ့ NEOWISE ကြယ်အောက်မှာ ကြယ်ကြွေချိန် လက်ထပ်ခွင့်တောင်း ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … Read more
မန်းလေး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်လေး
July 24, 2020 by CeleHits
မန်းတလေး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ လုပ်ရပ်လေး ပါပဲ။ အ ရမ်းကို လူပီသလွန်းတဲ့ မန်းလေး လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ် လေးစားဖို့ အရမ်းကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ…။ သတ္တဝါတိုင်းကလည်း သက်ရှိပဲဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ကယ်တင်ခဲ့တာကို မြင်တော့ လေးစားလွန်းလို့ သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိပါတယ်…. ။ ကျော်မသွားဘဲပုံလေးတွေက်ုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.။ သူတို့လေးတွေကလည်း အသက်နဲ့ပဲလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အသက်ရှိသမျှ အကုန် ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ မန်းလေး လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကို လေးစားရင် ရှယ်ပီး ဂုဏ်ပြုမျှဝေပေးကြပါလို့။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ မေတ္တာတရားကို တန်ဖိုးထားတတ်သူတွေ ပေါများလာမှာပါ။ Credit Zawgyi Version မန်းတေလး ရေဘးကယ္ဆယ်ရေးအဖြဲ့ရဲ့ မြန်ျမတ္လွတဲ့ လုပ်ရပ်လေး ပါပဲ။ အ ရမ်းကို လူပီသလြန်းတဲ့ မန်းလေး လူမှုကယ္ဆယ်ရေးအဖြဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ် လေးစားဖို့ အရမ်းကောင်းလြန်းပါတယ္ဗ်ာ…။ … Read more
ဒေါ်လာ (၄ဝဝဝ)တန် ရွှေ မျက်နှာဖုံး နဲ့ လူကြား ထဲ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေ တဲ့ အိန္ဒိ ယ သူေ ဌး
July 5, 2020 by CeleHits
ဒေါ်လာ (၄ဝဝဝ)တန် ရွှေ မျက်နှာဖုံး နဲ့ လူကြား ထဲ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေ တဲ့ အိန္ဒိ ယ သူေ ဌး ဇူလိုင်လ ၄ရက်၊ စနေနေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပူနာတွင် လူအများကြားရေပန်းစားခဲ့သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စီးပွားေ ရးသမား Shankar Kurhade သည် ဒေါ်လာ 4000 (ကျပ် ၅၅သိန်းခန့်)တန်ဖိုး ရှိ ရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရွှေမျက်နှာဖုံးမတ်စ် ကိုဝတ်ဆင်ပြီးသွားလာခဲ့တာပါ။ “သူ့ရဲ့ ရွှေမျက်နှာဖုံး ဟာ ၂ အောင်စအလေးချိန်ရှိပြီး ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် လက်မှုပညာရှင်များက ၈ ရက်အချိန်ယူခဲ့ရသည်ဟု အနောက်ပွန်းမြို့ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Shankar Kurhade ကပြောကြားသည်။ “ကျနော်ရုပ်မြင်သံကြား ကနေပီး ငွေမျက်နှာဖုံး အကြောင်းကိုကြည့်ရတယ်။ အဲတာနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ လုပ်သူကိုဖုန်းဆက်ပီး … Read more
မိဘအပေါ်သိတတ်နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဈေးရောင်းနေတာပါဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်
မိဘနှစ်ပါးကို ဝင်ငွေကူရှာပေးတဲ့အနေနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Parit Buntar မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်ဟာ Maybank ဆိုတဲ့ ဘဏ်အရှေ့မှာ မရှက်မကြောက်တမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေး Asam Laksa ဆိုတဲ့မလေးရိုးရာအစားအစာခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးကို ရောင်းချနေခဲ့တာပါ ။ ဈေးထိုင်ရောင်းနေတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကို မြင်တဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတိုင်းက အဆိုပါခေါက်ဆွဲတွေကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ကလေးငယ်တွေရောင်းချတဲ့ ခေါက်ဆွဲဟာ အရသာအတော်လေးကောင်းလွန်းလို့ Facebook အသုံးပြုသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအား ကလေးငယ်ရဲ့ခေါက်ဆွဲကို ဝယ်ယူအားပေးကြအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကလေးငယ်နှစ်ယောက်လုံးဟာ အသက် 10 နှစ်အောက် အရွယ်လေးတွေသာရှိသေးပြီး ဆော့ကစားရမည့်အရွယ်မှာ မိဘတွေကိုကူညီပေးနေခဲ့ကြတာပါ ။ လူအတော်များများက ကလေးငယ်တွေရဲ့ခေါက်ဆွဲကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပြီး အရသာအတော်လေးကောင်းမွန်ကြောင်း ၊ အထုပ်အပိုးလေးတွေကလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ကြောင်း ၊ ဘုရားရှင် ကောင်းချီးပေးမဲ့ကလေးငယ်တွေ … Read more
ညီမအရင်းလို သဘောထားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာကိုယ့်ယောင်္ကျားနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းခိုးယူခဲ့တဲ့မိန်းမကို တိုင်းသိပြည်တိအရှက်ခွဲပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
Hanna အမည်ရှိတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ အသက် 34 နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အပြက် မိတ်ကပ်ဆရာတစ်ယောက် အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့နောက် သူမဟာ Yaya အမည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးကို Kuala Lumpur မြို့မှာ marketing သင်တန်းတက်နေတုန်း အဖော်မရှိဘဲတစ်ယောက်တည်းထိုင်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ စပြီးခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်ရင်း ထိုအချိန်ကတည်းကသူမတို့ဟာ ညီမအရင်းတွေလို ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ Hanna ဟာ သူမရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နဲ့ အဆိုပါမိန်းကလေးတို့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တာကို ရင်ကွဲဝမ်းနည်းစွာနှင့် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဝေမျှခဲ့ရင်း အဆိုပါကိစ္စဟာအတော်လေးကို ရေပန်းစားနေလျက်ရှိပါတယ် ။ Hanna ကတော့ အဆိုပါမိန်းကလေး နဲ့ သူမရဲ့ခင်ပွန်းတို့ အချင်းချင်း message ပေးပို့ရင်း ချစ်သူအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ စာတွေကိုဖတ်မိခဲ့ပါတယ် ။ Hanna ဟာ အဆိုပါမိန်းကလေးကို နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပြီး အရင်ဆုံး … Read more
မိုးကောင်းမြို့ နန့်ရင်းရပ်ကွက်တွင် လမ်းတံတားဆောက်လုပ်ရေးမြေတူးစဉ် ကျောက်စိမ်းထွက်သောကြောင့် ဒေသခံများတူးဖော်နေဇွန် ၂၇ ၊ မိုးကောင်း မိုးကောင်းမြို့နယ် နန့်ရင်းရပ်ကွက်တွင် ရေမြှောင်းတူဖော်နေစဉ် ဒေသခံများမှ ကျောက်စိမ်းလိုက်ကောက်မှုများ ကြောင့် လုပ်ငန်းအပေါ် နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်စေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့များ စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း နန့်ရင်းရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောသည်။ “ပထမပိုင်းတော့ ရဲတွေဘာတွေမပါဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သွားပြောတယ်။ လာပြောတဲ့အချိန် ခဏတဖြုတ်ကြာရင် သူတို့ ဘက်ဟိုးကုတ်ရင်လည်း သွားပြီးမှ ဝင်ပြီးတော့မှ ကောက်ကြတာတွေရှိတာပေါ့။ “ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ညအချိန် ကျောက်စိမ်းခိုးတူးနေသူများလည်းရှိပြီး လုပ်ငန်း နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်စေရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ သွားရောက် စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ “ဒေသခံတွေက လမ်းတူးနေပေမဲ့လည်း သူတို့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုဒ်ထဲမှာ ကျောက်ဝင်ရှာကြတာပေါ့။ တခါတခါကျရင် ညဘက်လည်း ကျောက်ခိုးတူးကြတာပေါ့။ … Read more